03/10/2018 - Page 2 sur 4 -
Dina fitsipi-pitondran-tenan’ny kandidà : Hosoniavina androany
« Tsy voatery manao sonia ny fitsipi-pitondran-tena entina mandritra ny fifidianana ireo kandidà, fa kosa miankina betsaka amin’ny finiavany sy ny feon’ny fieritreretany izany”, io no nambaran’ ny filohan’ny filankevitry ny fampihavanana Maka Alphonse, omaly. …Tohiny
Noho ny hasarotam-piaro tafahoatra : Nirongatra ny famonoam-bady
Hasarotam-piaro mifangaro olana ara-bola, hamamoana miampy zava-mahadomelina… Ireo avokoa no antony lehibe nahatonga ireny vonoan’olona feno habibiana hita nifanesy tao anatin’ny telo volana farany teto an-drenivohitra izay. Tao anatin’ny iray volana anefa no hita fa …Tohiny
67Ha : Lehilahy iray maty nisy namono
Tsy tana ny ain’ilay lehilahy iray manodidina ny 21 taona voavely tamin’ny hazo tao amin’ny faritry ny lohany. Araka ny tati-baovao voaray avy an-toerana dia nisotrosotro niaraka tamin’ny namany tany anaty ”bar” izy, no raikitra …Tohiny
Mpifankatia namono tena : Namoy ny ainy ny lehilahy
Nahazendana, izay no azo hamaritana ity toe-java-nitranga teny Sabotsy Namehana ny alahady lasa teo ity. Mpifankatia no voalaza fa niara-namono tena tao anaty rano ambany tetezana teny an-toerana rehefa tsy navela hiaraka. Tsy araka ny …Tohiny